Cách Làm Bánh Trôi Thơm Ngon, Mềm Dẻo | Muasalebang - Muasalebang
Cách Làm Bánh Trôi Thơm Ngon, Mềm Dẻo | Muasalebang
Đang Đọc: Cách Làm Bánh Trôi Thơm Ngon, Mềm Dẻo | Muasalebang in Muasalebang
Ikhekhe le-Drift manje selibonakala seliyisidlo sendabuko sabantu baseVietnam, hhayi nje ngesikhathi seholide le-Tet kuphela kodwa nganoma yisiphi isikhathi lapho uthanda, ungakwazi futhi ukwenza amapuleti ekhekhe elintantayo ukuze ushise impepho ukuze ukhulekele amadlozi noma uvumele wonke umndeni ukujabulele. futhi indlela elula kakhulu yokwenza. Namuhla, ngizonethulela ezinye izindlela zokwenza amakhekhe antantayo amnandi futhi aguquguqukayo; Ungazenzela wena ekhaya esikhundleni sokuya esitolo.
1 Indlela yokwenza ikhekhe elintantayo lesitayela saseNyakatho
2 Indlela yokwenza ikhekhe elintantayo lesitayela saseNingizimu
3 Indlela yokwenza ikhekhe elintantayo elimibalabala
4 Indlela yokwenza ikhekhe elintantayo elinosawoti omningi
5 Amanothi ngesikhathi sokwenza ikhekhe le-drift
6 Qaphela ukugcina amakhekhe antantayo
Indlela yokwenza ikhekhe elintantayo lesitayela saseNyakatho
Izithako zekhekhe elintantayo lesitayela saseNyakatho
Ufulawa werayisi onama-glutinous
Ufulawa werayisi ongenalutho
Isinyathelo 1: Hlanganisa ufulawa ngesilinganiso: 1: 4 (okungukuthi ingxenye engu-1 yerayisi engenalutho enezingxenye ezingu-4 zerayisi e-glutinous) nosawoti omncane (ngokuya ngosayizi wokuphakela, ungasebenzisa ivolumu engaphezulu noma encane)
Faka amanzi kancane kancane kule ngxube engenhla bese uxova inhlama ize ibe yinhlama eguquguqukayo, ngokunwebeka okuphakathi, ingahlukani, inganamatheli ezandleni zakho.
Ngemuva kokuthi inhlama ibumbene ibe yibhola, vala inhlama nge-plastic wrap bese uyiyeka iphumule imizuzu engaba ngu-30. Qaphela:
+ Ukugaya irayisi elimanzi kuzonikeza ikhekhe lekhwalithi engcono kakhulu kodwa ngokuvamile kuthatha isikhathi eside, ngakho-ke kungcono kakhulu ukugaya futhi usebenzise irayisi elomile noma usebenzise ufulawa othengiswa ezitolo ezinkulu.
+ Noma ukuze wonge isikhathi esengeziwe, ungathenga inhlama yokudlala eseyenziwe isilungile ukuze wenze amaqebelengwane antantayo.
Isinyathelo sesi-2: Qoba umoba ube yizikwele zembewu yehalananda, noma usungazithenga ezitolo zezimpahla ezomile. Kuye ngobukhulu bekhekhe lakho, ungakwazi ukusika ushukela ube usayizi omncane, inqobo nje uma ulingana nebhola lenhlama.
Isinyathelo sesi-3: Gcoba usesame omhlophe (sesame) kuze kube yigolide, bese uvala ukushisa, qhubeka ugazinga kuze kube yilapho i-sesame iphenduka igolide, bese uyithela epuleti, uyisakaze ibe mncane. I-Copra igaywe ibe imicu emincane.
Isinyathelo sesi-4: Okulandelayo, khipha inhlama endishini bese uyihlukanisa ibe encane, ngisho namabhola (nakisisa ukuthi ungavumelanisi nenhlama kakhulu, kuzokwenza ukuthi ikhekhe lichotshozwe uma libilisiwe). Ungasebenzisa iphini lokugoqa ukugoqa inhlama noma usakaze inhlama ngesandla, bese ufaka ikhiyubhu likashukela phakathi, bese ugoqa inhlama ibe yibhola eliyindilinga. Kodwa-ke, kuhle ukusabalalisa inhlama ngesandla ukuze inhlama igcine umswakama.
Isinyathelo sesi-5: Lungiselela ibhodwe elingu-1 lamanzi abilisiwe (okungenani inhlama yakho, ukuze kuthi lapho ikhekhe licwiliswa emanzini) kanye nesitsha samanzi abandayo ukugqoka ikhekhe. Lapho amanzi abilayo, engeza ikhekhe kancane kancane, upheke ngokushisa okuphansi ukuze ikhekhe iphekwe ngokulinganayo futhi ushukela ekugcwaliseni uhlakaze. Lapho ikhekhe lintanta phezulu futhi i-crust icacile, ikhekhe seliphekiwe, livumele kuthathe imizuzwana engu-15 ukulikhipha, qaphela ukuthi lingahlali isikhathi eside, lizocwila futhi libhidlike.
Isinyathelo sesi-6: Sebenzisa i-slotted spoon ukuze ukhiphe ikhekhe, ngokushesha ulifake endishini elungiselelwe amanzi abandayo ukuze ikhekhe libumbe futhi lingahlangani ndawonye. Cishe imizuzu engu-2-3, ikhekhe lizophola ngokuphelele, bese usebenzisa i-spoon ebhoboziwe ukuze ulithathe epuleti bese ufafaza isesame egazingiwe kanye nokhukhunathi ogayiwe phezulu ukuze uqedele. Ngomhluzi wekhekhe, ungafaka ushukela we-fenugreek, uphihlize ujinja omncane ozowusebenzisa ekhekheni elintantayo, futhi limnandi kakhulu.
Indlela yokwenza ikhekhe elintantayo lesitayela saseNingizimu
Ikhekhe elintantayo lesitayela saseNingizimu, eNyakatho, libizwa ngekhekhe lemifino elinonamathiselwe kabhontshisi oluhlaza.
Izithako zekhekhe elintantayo lesitayela saseNingizimu
Ufulawa we-Glutinous: 300 gr
Ubhontshisi obuluhlaza ngaphandle kwesikhumba: 300 gr
Ufulawa weTapioca: 150 gr
I-Grapefruit amafutha abalulekile: 10 gr
I-sesame emhlophe (eyosiwe): 10 gr
Ushukela omhlophe: 250 gr
Isinyathelo 1: Yenza ikhekhe ligcwale
+ Geza ubhontshisi oluhlaza bese ucwilisa emanzini amahora angu-3-4 noma cwilisa ubhontshisi obuthambile ubusuku bonke, bese uthela ubhontshisi oluhlaza kubhasikidi bese uwugeza futhi. Okulandelayo, faka ubhontshisi oluhlaza kubhasikidi bese ufaka umusi uze uthambe ubhontshisi. Qaphela: ungasebenzisa ubhontshisi oluhlaza ngesikhumba. Cwilisa ama-chickpeas, hlanza izikhumba bese ufaka umusi kuze kube ubhontshisi uthambe.
+ Thela amabhontshisi ambalwa aphekiwe endishini ehlukile ukuze upheke amanzi, amanye ubhontshisi uwafake ku-blender futhi uhlanganise kuze kube bushelelezi.
+ Thela ubhontshisi oluhlaza epanini elingagxili bese ufaka ushukela, uvule isitofu ugovuze kuze kube yilapho inhlama ye-mung bean incibilika ngokulinganayo noshukela, bushelelezi, futhi yome ukuze ikwazi ukugoqwa, bese uvala isitofu. . (ungangeza ufulawa werayisi onama-glutinous noma ufulawa werayisi onamafutha)
+ Faka ingcosana yamafutha embali ye-pomelo ugovuze kahle, bese uvumela ubhontshisi oluhlaza uphole. Hlukanisa inhlama kabhontshisi oluhlaza ngokulinganayo ube amabhola alinganayo, bese ugoqa ibhola libe yindilinga, umboze ngefilimu yokudla ukuvimbela ukugcwaliswa ukuthi kuphele.
Isinyathelo sesi-2: Yenza uqweqwe lwekhekhe elintantayo
Faka ufulawa werayisi onama-glutinous endishini enkulu, bese wengeza kancane kancane amanzi afudumele bese uxuba kahle, lapho inhlama imanzi ngokwanele, yimise, uxove inhlama kuze kube yisisindo esibushelelezi, esivumelana nezimo.
Isinyathelo sesi-3: Yenza ikhekhe:
+ Hlukanisa inhlama yekhekhe ibe izingxenye eziningana ezilinganayo, bese uyindilinga. Bese ucaba inhlama, ubeke inhlama kabhontshisi phakathi bese uyibuyisela emuva ize ivaleke, bese ugoqa ikhekhe ukuze ligoqeke ngokulinganayo.
Okulandelayo, caba ikhekhe kancane. Kanjalo nje, yenza yonke inhlama nekhekhe ligcwaliswe.
Thela amanzi ebhodweni bese ulethe ngamathumba, bese uphonsa ikhekhe emanzini abilayo, lapho ikhekhe liphekwe, ubilise enye imizuzu engu-1-2, bese uvala isitofu, susa ikhekhe bese uphonsa endishini ebandayo. manzisa cishe imizuzu emi-5 ukuze ikhekhe lipheke, lipholile futhi lingabambeleli ndawonye.
Isinyathelo sesi-5: Pheka isobho lekhekhe lerayisi
+ Sebenzisa ngokunenzuzo ibhodwe lamanzi abilisiwe ukupheka itiye, engeza ushukela ukuze ulenze libe mnandi ngokwanele ukuze livumelane nokunambitheka kwakho, engeza amaqabunga e-pandan ambalwa ukuze alenze libe mnandi, bese upheka kuze kube yilapho amanzi ebila.
+ Faka isitashi se-tapioca endishini yamanzi abandayo, ugovuze size sincibilike, bese uthele kancane kancane ebhodweni letiye, ugovuze ngenkathi usilungiselela, ukuze itiye lingagoqi.
+ Uma ubona ukuthi ibhodwe letiye liqinile, yima, upheke kuze kube yilapho itiye libila, bese ufaka wonke ubhontshisi oluhlaza osele ngemuva, ugovuze kahle ukuze ucime isitofu.
+ Faka amafutha abalulekile embali yamagilebhisi ukuze uthole iphunga elimnandi, bese ugoqoza futhi ukuze uqedele itiye.
Isinyathelo sesi-6: Khipha ikhekhe elintantayo ulifake endishini encane, bese ukha itiye eliphekiwe kulo, ufafaze imbewu kasesame emhlophe egazingiwe kanye nokhukhunathi ogayiwe phezulu, uyeke kuphole ukuze ukwazi ukukujabulela.
Indlela yokwenza ikhekhe elintantayo elimibalabala
Izithako zokwenza amakhekhe antantayo anemibala
Ufulawa weTapioca: 45 gr
Imbali ye-butterfly eyomile: 5 gr
Inyama ye-gac: 50 gr
Iwayini elimhlophe: 100 ml
Ushukela wesundu: 150 gr
Ubhontshisi obuluhlaza ngaphandle kwesikhumba: 200 gr (omisiwe)
Ushukela omhlophe: 20 gr
Ufulawa weTapioca: 10 gr
Isinyathelo 1: Ingxenye yombala wokuqala
Gcoba izimbali ze-butterfly pea omisiwe ku-100ml wamanzi ashisayo imizuzu engu-5-10.
Faka inyama ye-Gac endishini encane, cwilisa ku-100ml iwayini elimhlophe imizuzu engu-5-10.
Isinyathelo sesi-2: Xuba u-100g kafulawa werayisi o-glutinous no-15gr we-tapioca isitashi endishini, bese ufaka u-100ml wamanzi.
Xuba u-100g kafulawa werayisi o-glutinous no-15g we-tapioca isitashi, uthathe u-100ml wamanzi omile omisiwe we-butterfly pea endishini.
Okokugcina, hlanganisa i-100g kafulawa werayisi onamafutha, amagremu angu-15 wesitashi se-tapioca kanye ne-100ml yejusi ye-gac endishini.
Kunezitsha ezi-3 ezihlukene zenhlama sezizonke.
Isinyathelo sesi-3: Ngemva kokuxuba ufulawa, xova inhlama ngesandla kuze kube yilapho inhlama ibushelelezi, izigaxa ezimbili zenhlama ziphenduka i-gac eluhlaza okwesibhakabhaka nebomvu.
Ekugcineni thola izinhlobo ezi-3 zenhlama, bopha inhlama ngayinye bese uphumula cishe imizuzu eyi-10.
Isinyathelo sesi-4: I-slug enonamathiselwe kabhontshisi oluhlaza: beka ipani esitofini ekushiseni okuphakathi, engeza u-100g we-jaggery ehlanzekile, engeza ukhukhunathi ochotshoziwe nobhontshisi oluhlaza epanini.
Govuza ingxube ekushiseni okuphansi kuze kube yilapho inhlama kancane kancane yakha isisindo esibushelelezi, esibushelelezi, bese uvala ukushisa, ulinde ubhontshisi we-mung ukuthi uphole.
Isinyathelo sesi-5: Hlukanisa inhlama kabhontshisi we-mung ibe izingxenye ezincane ezilinganayo bese wenza amabhola abe amabhola alinganayo.
Sebenzisa ummese ukuze usike i-jaggery esele ibe izikwele ezincane.
Thatha inhlama encane, uyigoqe bese uyicaba ukuze ilingane nama-cubes kashukela. Ngokufanayo, thatha inhlama enkulu, ugoqe efanayo ukuze ufake induku kabhontshisi.
Qhubeka nokusebenza kuze kube yilapho yonke ufulawa usugcwalisiwe, futhi ekugcineni uzothola amabhola etiye anemibala emithathu ehlukene.
Beka ibhodwe eziko ekushiseni okuphakathi, faka amanzi, amaqabunga e-pandan ambalwa bese ubilisa ukupheka ikhekhe elintantayo, ufake umbala ngamunye emabhodweni amathathu ukuze ubilise ngokuhlukana, uma usuvuthiwe ulikhiphe ulifake epanini. indishi yamanzi abandayo ukuze inganamatheli
Isinyathelo sesi-6: Thatha isitashi se-tapioca esicwiliswe ngamanzi abandayo, ubeke ibhodwe esitofini ekushiseni okuphakathi, ubeke amanzi, ushukela kanye nofulawa we-tapioca osanda kucwiliswa ebhodweni, bese ulethe ngamathumba.
Ngemuva kokuthi amanzi ashukela abilisiwe, engeza amabhontshisi ambalwa aphekiwe bese upheka ndawonye, ​​​​qhubeka ugoqa ngokuqhubekayo enye imizuzu engu-2-3, bese uvala ukushisa.
Isinyathelo sesi-7: Ekugcineni faka amabhola ekhekhe endishini, engeza amanzi ashukela kabhontshisi oluhlaza asanda kuphekwa, ufafaze kukhukhunathi omncane ogayiwe noma ungawangezi amanzi anoshukela, ungafafaza usesame omncane nokhukhunathi ogayiwe phezulu. enhle kakhulu futhi enephunga elimnandi.
Indlela yokwenza ikhekhe elintantayo elinosawoti omningi
Ngaphezu kokugcwalisa okumnandi kwendabuko, ukugcwaliswa okumnandi nakho kuthandwa ngabantu abaningi.
Izithako zokwenza ikhekhe elintantayo elinosawoti omningi
Ufulawa onama-glutinous: 500g
Ingulube egayiwe: 100g
I-shrimp egayiwe: 100g
I-Ginger: 1 encane eqoshiwe
Ubhontshisi oluhlaza: 200g
Isesame egazingiwe, u-anyanisi onsomi ogayiwe
Usawoti, ushukela, i-monosodium glutamate, isinongo…
Faka ingulube egayiwe nezimfanzi endishini, engeza ½ ithisipuni kasawoti, ½ ithisipuni yesinongo, ½ isipuni sikashukela, ishalothi encane egayiwe bese ugoqoza ukuze u-marinate cishe imizuzu eyi-10 ukufaka izinongo.
Gcoba ubhontshisi oluhlaza amahora ama-2 uze uthambe, uwageze bese uwashisa. Bese ufaka ku-blender puree. Saute shallots nengulube bese ufaka ubhontshisi oluhlaza ku-slugs, engeza usawoti omncane noshukela ukunikeza ubhontshisi oluhlaza ukunambitheka okuqinile.
Ubhontshisi oluhlaza uhlukaniswe amabhola amancane bese uyayindilinga. Inyama nezimfanzi kuhlukaniswe izingcezu ezincane kunokugcwalisa ubhontshisi wemung. Sebenzisa izandla zakho ukuthambisa ubhontshisi oluhlaza, bese ubeka izimfanzi nenyama phakathi, uyindilinga futhi ubeke eceleni.
Xuba ufulawa werayisi oshibilikayo ngamanzi afudumele anele ukuze wenze inqwaba ebushelelezi, enwebekayo. Vumela inhlama iphumule cishe imizuzu eyi-10. Bese uhlukanisa inhlama ibe amabhola amancane alinganayo bese uwagoqa abe amabhola.
Sebenzisa izandla zakho ukucaba inhlama, faka izimfanzi nobhontshisi oluhlaza phakathi nendawo, bese uyigoqa, ubeke eceleni. Qhubeka nokwenza kuze kuqedwe ukugcwaliswa. Qaphela ukuthi amabhlogo ekhekhe aqediwe awahlanganisi phezu komunye nomunye.
Bilisa ibhodwe eli-1 lamanzi, bese uphonsa kancane kancane ikhekhe ngalinye elintantayo libe libilayo. Bilisa kuze kube yilapho ikhekhe lintanta phezulu futhi umbala we-crust ucacile, ikhekhe liphekwe, susa ikhekhe bese ulifaka endishini yamanzi abandayo ukuze ungabambeleli.
Ungasebenzisa umhluzi wekhekhe (cishe u-2 wamalitha amanzi) bese ufaka ushukela (ubumnandi buncike ekunambithekeni) ukupheka kuze kuncibilike ushukela, lapho ibhodwe lamanzi selibila, uphonsa amakhekhe antantayo aphekiwe, ugovuze ngobumnene ukwenza. ikhekhe alinamatheli. Faka enye i-ginger esikiwe bese ulinda amanzi ukuthi abilise futhi, bese uvala ukushisa
Ngakho, ikhekhe elintantayo elinosawoti liyaphela. Ukuze ujabulele, ukha amanzi anosawoti endishini ngayinye, engeza ukhukhunathi ogayiwe, usesame omnyama ogazingiwe, ungaqala ukuzwa ukunambitheka kwetiye, ingxenye yetiye ayimnandi kakhulu, ukugcwaliswa kunosawoti futhi kumnandi. , kumnandi ikhekhe elintantayo lamanzi, liyanamathela futhi liyakhanga.
Amanothi ngesikhathi sokwenza ikhekhe le-drift
Ubhontshisi oluhlaza kufanele ukhethe imbewu encane ukwenza ikhekhe libe nephunga elimnandi
Lapho uxova inhlama, kancane kancane uthele emanzini futhi uxove ukuze inhlama ingabi mushy
Gcoba inhlama ukumboza ikhekhe ngokuqinile, gwema ukungena komoya ngoba lapho ukugoqa kungaqinile, lapho kubilisiwe, ikhekhe lizophulwa.
Qaphela ukugcina amakhekhe antantayo
Ukuqinisekisa ubumnandi, ukuguquguquka kwekhekhe kanye nokuqinisekisa impilo, kungcono ukungavumeli ikhekhe lidlule ubusuku bonke. Lapho wenza amaqebelengwane antantayo, kufanele kwenziwe ngenani elilinganiselwe, elanele ukudla.
Uma uxova inhlama kakhulu, ungagcina inhlama yekhekhe (engashintshiwe) esiqandisini ubusuku bonke noma iqhwa izinsuku ezimbalwa bese upheka ikhekhe ngosuku olulandelayo. Nokho, ngaphambi kokuxova inhlama, kufanele wengeze amanzi amancane ukuze inhlama ingomi.
I-Hanoi ingena ezinsukwini ezibandayo zasebusika, khona-ke ikhekhe lamanzi lizoba enye yezidlo ezikhethwa ngumndeni wonke. Isitsha sekhekhe elintantayo sanele ukufudumala inhliziyo yanoma ubani ngaphansi kwamakhaza ashubisa umnkantsha womoya ngamunye wasenyakatho-mpumalanga. Amadombolo nawo azoba yinketho yempelasonto yemindeni, ikakhulukazi ngalesi sikhathi sodlame.
Ngenhla kukhona ezinye zezindlela zokwenza amakhekhe antantayo amnandi, aguquguqukayo ukuze ukhulekele amadlozi noma uphathe wonke umndeni hhayi kuphela phakathi Nonyaka Omusha Wenyanga kodwa nganoma yisiphi isikhathi lapho ufuna khona ngenxa yezithako ezilula nokuqaliswa okulula, akunjalo? Ngikufisela inhlanhla!